Register လုပ်ပြီးကြည့်ရှု့သူ ၁.၈ ဘီလီယံအထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ YouTube – AsiaApps
Register လုပ်ပြီးကြည့်ရှု့သူ ၁.၈ ဘီလီယံအထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ YouTube
May 7, 2018 WilliamApp NewsNo Comment on Register လုပ်ပြီးကြည့်ရှု့သူ ၁.၈ ဘီလီယံအထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ YouTube
လက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ “largest video platform” ဂုဏ်ဆောင်ထားတဲ့ YouTube မှာတော့ Register လုပ်ပြီးကြည့်ရှု့သူဉီးရေဟာ ၁.၈ ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဇွန်လတုန်းက ကြည့်ရှု့သူဉီးရေဟာ ၁.၅ ဘီလီယံသာရှိပြီး အခု ၂၀၁၈ ဇွန်လ မရောက်ခင်နားမှာတော့ ကြည့်ရှု့သူဉီးရေ ၁.၈ ဘီလီယံအထိ အထိဖြစ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလ တစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာ ကြည့်ရှု့သုံးစွဲသူဉီးရေ ၃၀၀ မီလီယံ အထိတိုးမြှင့်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိဖော်ပြထားတဲ့ ကြည့်ရှု့သူဉီးရေ ၁.၈ ဘီလီယံဟာ YouTube ကို Sign-in လုပ်ပြီးကြည့်ရှု့သူ အရေအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ (YouTube အနေနဲ့ Sign-in မပြုလုပ်ပဲ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ Data တွေကို သိမ်းထားခြင်းမရှိသလို စောင့်ကြည့်ထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။)..
မိနစ်တိုင်းမှာ ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာဟာ YouTube ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်တိုင်း YouTube ပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ဗီဒီယိုတွေရဲ့ ကြာမြင့်ချိန်စုစုပေါင်းဟာ ၄၀၀ မိနစ်လောက်အထိရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ အဲ့လိုများပြားလှတဲ့အတိုင်းအတာအရေအတွက် ဗီဒီယိုတွေက ကုမ္ပဏီကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့တဲ့နေရာမှာ ခက်ခဲအောင်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်သလို များပြားလှတဲ့အတိုင်းအတာအရေအတွက်ကပဲ YouTube ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Platform တစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးပေးနေတာပါ။ (ကြော်ငြာထည့်လို့ အကောင်းဆုံး Platform တစ်ခုအဖြစ်ရောပေါ့..?)
ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ YouTube ကိုပိုမိုစည်းကမ်းတင်းကြပ်တဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ဖို့ နည်းပညာအသစ်တွေ၊ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု့သူဉီးရေတွေကို ပိုမိုခန့်အပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေကြားနေရပါတယ်။ (၂၀၁၇ နှစ်အစပိုင်းတုန်းကဆိုရင် ဉပဒေနဲ့ စွန်းညိနေတဲ့ ဗီဒီယိုပေါင်း ၈ မီလီယံကျော်ကို Site ကနေဖြုတ်ချဖူးပါတယ်။)
ကွန်ကရက်ပါ! YouTube ရေ…
Cambridge Analytica Company ပိတ်သိမ်းတော့မယ်
အခန့်ညားဆုံး လူအယောက် ၅၀ ရဲ့ဓာတ်ပုံကို iPhone X နဲ့ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့ People Magazine